သတင်း - ဆီအမျိုးအစား ထရန်စဖော်မာအကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်
ဆီအမျိုးအစား Transformer ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တည်းဖြတ်ခြင်း မြို့ပြရထားပို့ဆောင်ရေး ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်၏ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံတွင် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ပင်မထရန်စဖော်မာသည် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း သုံးဆင့်ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာကို အသုံးပြုသည်။
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာများသည် အဓိကအားဖြင့် သံအူတိုင်များ၊ အကွေ့အကောက်များ၊ လောင်စာတိုင်ကီများ၊ ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများ၊ ရေတိုင်ကီများ၊ ဆီခေါင်းအုံးများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပြန်တမ်းများ၊ လျှပ်ကာအင်္ကျီများ၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ပြွန်များနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သံအူတိုင် သုံးဆင့်ဆီနှစ်မြုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ ကောက်ကြောင်းပုံကားချပ် သံအူတိုင်သည် သံလိုက်ဓာတ် စိမ့်ဝင်နိုင်မှု ကောင်းမွန်သော အလာမီနီယမ် ဆီလီကွန်စတီးအခင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် အပိတ်သံလိုက်လှိုင်းပတ်လမ်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။ Transformer ၏မူလနှင့်အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်များသည် သံအူတိုင်ပေါ်တွင် အနာရှိနေပါသည်။ Transformer cores များကို core type နှင့် shell type ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။လက်ရှိတွင် အသုံးများသောထရန်စဖော်မာများသည် core အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နှလုံးပုံသဏ္ဍာန် သံအူတိုင်တွင် တောင်သံအူတိုင်နှင့် သံထမ်းပိုးတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ သံအူတိုင်တွင် သံအူတိုင်ကို အအေးပေးရန်အတွက် ဆီလမ်းကြောင်းတစ်ခု ပါ၀င်ပြီး ၎င်းသည် ထရန်စဖော်မာဆီ လည်ပတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး စက်ပစ္စည်းများ၏ အပူပြန့်ပွားမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ကွိုင်ဟုလည်း ခေါ်သော အကွေ့အကောက်များသည် Transformer ၏ conductive loop ဖြစ်သည်။ Multilayer ဆလင်ဒါတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
1. အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်များကို သံအူတိုင်တိုင်ပေါ်တွင် စုစည်းထားသည်။
2. လျှပ်ကာအတွက်၊ ဗို့အားနိမ့်အကွေ့အကောက်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အတွင်းဘက်တွင်ရှိပြီး ဗို့အားမြင့်အကွေ့အကောက်များသည် အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။ ဝါယာကြိုးများနှင့် ဝါယာကြိုးများကြားရှိ လျှပ်ကာပစ္စည်းများကို မြေပြင်ပေါ်သို့ သေချာစေရန် ဝါယာကြိုးများပတ်ပတ်လည်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်းများကို ပတ်ထားသည်။
3. ဆီတိုင်ကီ ဆီတိုင်ကီသည် ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ အခွံဖြစ်သည်။ ဆီအပြင် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
4. ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာသည် ထရန်စဖော်မာ၏ ဒုတိယဗို့အား တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အား အတက်အကျရှိသောအခါ ဒုတိယအခြမ်းအထွက်ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် ထရန်စဖော်မာကိုနှိပ်ခလုတ်ကို ချိန်ညှိရန် ဗို့အားထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။ ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲခြားထားသည်- on-load pressure regulating device နှင့် no-load pressure regulating device။
5. ရေတိုင်ကီ ရေတိုင်ကီသည် ဆီတိုင်ကီ၏နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းများကို ပိုက်လိုင်းများမှတစ်ဆင့် ဆီတိုင်ကီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထရန်စဖော်မာ၏ အထက်ဆီအပူချိန်နှင့် အောက်ဆီအပူချိန်အကြား အပူချိန် ကွာခြားသွားသောအခါတွင် ဆီ၏ convection သည် ရေတိုင်ကီမှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေတိုင်ကီမှ အအေးခံပြီးနောက် ဆီတိုင်ကီသို့ ပြန်စီးဆင်းသည်။ Transformer ဆီ အပူချိန် အခန်းကဏ္ဍ။ cooling effect ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ self-cooling၊ forced air cooling နှင့် forced water cooling ကဲ့သို့သော အတိုင်းအတာများကို ချမှတ်နိုင်သည်။
6. ရေနံခေါင်းအုံးဆီ ခေါင်းအုံးကို ဆီတိုင်ကီလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ထရန်စဖော်မာဆီသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကျယ်လာပြီး ကျုံ့သွားကာ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ဆီအဆင့်သည်လည်း မြင့်တက်လာမည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆီတိုင်ကီကို အမြဲဆီပြည့်နေအောင် ဆီကို အပူများ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းအတွက် ဆီခေါင်းအုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဆီတိုင်ကီကို အမြဲပြည့်နေစေရန်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရေနံခေါင်းအုံးကြောင့် ဆီနှင့် လေကြား ထိတွေ့မှု ဧရိယာကို လျော့ကျစေပြီး ဆီ၏ ဓာတ်တိုးမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။
7. Gas relay Gas relay သည် Buchholz relay ဟုခေါ်သော ဓာတ်ငွေ့ relay သည် transformer ၏ အတွင်းပိုင်း ချို့ယွင်းချက်များ အတွက် အဓိက အကာအကွယ် ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ ဆီတိုင်ကီနှင့် ဆီခေါင်းအုံးတို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော ဆီပိုက်အလယ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ထရန်စဖော်မာအတွင်း ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ဓာတ်ငွေ့ပြန်ပို့သည် တူညီသော ဆားကစ်သို့ လည်ပတ်ရန် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ဖွင့်ပေးသည်။ ထရန်စဖော်မာအတွင်း၌ ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ဓာတ်ငွေ့ပြန်ပို့သည် ချို့ယွင်းချက်အချက်ပြပတ်လမ်းသို့ ချိတ်ဆက်သည်။
8. Insulating bushs မြင့် နှင့် အနိမ့် insulating bush များသည် transformer tank ၏ အပေါ်ဆုံးအဖုံးပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြွေသားလျှပ်ကာများကို အသုံးပြုသည်။ insulating sleeve ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မြင့်မားသောဗို့အားအကွေ့အကောက်များ နှင့် ဆီတိုင်ကီကို ကောင်းစွာလျှပ်ကာထားရန်နှင့် ခဲများကို ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။
9. Explosion-proof tube ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံပြွန်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလေပြွန်ဟုလည်းလူသိများသော ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံပြွန်ကို ထရန်စဖော်မာ၏ဆီတိုင်ကီတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်း၏ပလပ်ကို ဖန်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံရုပ်ရှင်ဖြင့် အလုံပိတ်ထားသည်။ ထရန်စဖော်မာအတွင်း ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ပြန်ပို့မှု ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ဆီတိုင်ကီအတွင်းမှ ဓာတ်ငွေ့များသည် ဖန်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အမြှေးပါးမှတဆင့် ကွဲထွက်သွားပြီး ထရန်စဖော်မာ မပေါက်ကွဲစေရန် ဘေးကင်းသော လေလမ်းကြောင်းမှ ထွက်လာသည်။